Vivaldi 3.8 inowedzera yayo Ini Handina Hanya Nezve Cookies | Linux Vakapindwa muropa
Panyaya yemugove wemusika, browser rinotungamira mune ino chinyorwa harina zvakawanda zvekutaura. Kwamunofanira kuzviita ndiko maererano nemabasa, uye ndeyekuti browser iri rine zita remuimbi rakagadzirirwa vashandisi vanonyanya kuda. Shanduro mushure mevhezheni inowedzera maficha anovandudza kugadzirwa, asi nhasi ivo vaparura Vivaldi 3.8 Uye chinhu chekutanga chavanotaura ndechekuti ichavandudza ruzivo rwevashandisi zvine chekuita nezvinogumbura vamiririri senge makuki.
Sezvo zvaVivaldi 3.8 tichaona hurukuro isinganetsi makuki uye FLoC yakavharwa, se sezvo ivo vatove mberi mazuva apfuura. Mutsamba yekuburitsa zvinotaurwa kuti pane imwe sarudzo nyowani yekuvhara kuki uye mabhana mabhaisikopo ayo achatibatsira kuchengetedza nguva kugadzira kudzvanya kusiri madikanwa, kune ayo mazita senge EasyList Cookie uye ini handina basa nezve makuki anoshandiswa, chimwe chinhu nezve zvatakanyora mwedzi yapfuura. Iko kuwedzera hakuchazodiwa muVivaldi.
Zvimwe zvakakosha zveVivaldi 3.8
Iwo mapaneru akagadzirwazve nemifananidzo mitsva, isina miganhu uye zvirimo zvino zvinopenya. Zvakare, ikozvino iwe unogona kuseta opacity yemashure mako, iwe unogona kubatidza pane yakasviba kumashure kana kuita iyo bar iripachena.
Iye zvino unogona kuwedzera zvaunofarira nekukurumidza nekubatanidzwa kweCtrl + D, uko pasina vimbiso ichabvunzwa.
Kugona kudzima mbeva zvimiro.
Kugona kuwedzera zvinowedzera kukurumidza mirairo.
Vivaldi 3.8 yave kuwanikwa kurodha pasi kubva ku peji peji. Mune mamwe masisitimu anoshanda, akadai seaya akavakirwa paUbuntu, mushure mekutanga kuisirwa bhurawuza repositi rakawedzerwa, saka iyo vhezheni itsva ichave yave kutowanikwa kubva kune software centre. Mune vamwe, saManjaro, Vivaldi inogona kutorwa pasi kubva kumahofisi epamutemo, asi iyo vhezheni itsva ichasvika mumaawa mashoma kana mazuva anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vivaldi 3.8 inogumisa kurambwa kwayo kweFOC uye inowedzera yayo "Ini handina basa nekuki"